Boos celinta kirada gaariga qiimaha ugu fiican?
Naps raadinaya gaari kiro ah, iyada oo loo marayo mashiinka raadinta ee soo socda waxaad ka heli kartaa waxaad u baahan tahay.
Qorsheynta safarku waxay noqon kartaa hawl aad u fudud ama, liddi ku ah, hawlgal ka badan intii aan macquul ahayn. Si fiican u dooro meesha aad u socoto, duulimaadka, hoteelka ..., waxyaabo badan oo xisaabta lagu darsado iyo inaad si fiican u doorato inaadan furin. Waxaas oo dhan waa in lagu daraa wax aad muhiim u ah: Maxaa la sameeyaa haddii ay tahay inaan safro masaafo dheer ama aan booqano magaalooyin kala duwan inta aan safarka ku jirno?
Xulashada ugu weyn ee kiisaskan, uguna fudud, waa isticmaalka gaadiidka dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, doorashadan ayaa noo horseedi karta carqalado ka badan kuwa ka soo baxa jaleecada hore, maaddaama aan ku xiran nahay jadwallo taxane ah oo isdaba joog ah iyo qiimaha ugu dambeeya ee safarka ayaa noqon kara mid aad u sarreeya xaaladdan awgeed. Taas bedelkeeda, had iyo jeer ma sahlana inaad raacdo gaarigaaga. Markaas maxaan qabannaa?
Jawaabta su'aashani waa mid aad u fudud: gawaarida kirada ah. Gawaarida noocan ah waxaa si isdaba joog ah u dalbanaya dadka isticmaala ee doonaya inay yeeshaan safar fiican oo aan cabsi lahayn. Waa run in kireysiga gaari maanta aysan aheyn fikrad aad u soo jiidaneysa dad badan, oo wali aan ka warqabin faa iidooyinkiisa badan.
Marka xigta, waan ku caawin doonnaa, waxaan xallin doonaa inta badan shakigaaga waxaanan kugu hanuunin doonaa markay tahay kireynta gaari. Haddii aad rabto inaad ku hesho gaari kiro ah qiimaha ugu fiican, kaliya waa inaad gujisaa halkan.
Faa'iidooyinka isticmaalka gawaarida kirada ah
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, isticmaalka gaadiidka dadweynaha wuxuu soo bandhigayaa qasaarooyin badan marka la barbar dhigo faa'iidooyinka waaweyn ee xaqiiqda fudud ee kireysiga baabuurku na siiso.
Midka ugu horreeya dhammaantood waa Libertad. Guuritaanka ilaa intaad rabto waa wax cajiib ah. Walaacyadii ninku way dhammaadeen: saacaddu intee buu basku tagayaa?
Marka labaad, raaxo. Maaha wax la mid ah in lagu dhaqaaqo bas ama metro camiran oo aad ku keydiso boorsadaada waxay noqon kartaa safar dhan, maxaa yeelay marar badan ma haysanno booska la doonayo. Si kastaba ha noqotee, haddii aan kireysano gaari, duruufahaas oo dhan waa laga saarayaa.
Fure kale ayaa ah, shaki la'aan, ah keydinta. Kireysiga gaariga wuxuu ku kici karaa qiyaastii € 5-15 maalintii, wax aad uga hooseeya qiimaha qaadashada dhowr bas, taksi, iwm.
Kaliya qaar ka mid ah faa'iidooyinka kireysiga gaariga ayaa lagu sheegay. Xaqiiqdii, markaad go'aansato inaad sameyso, waxaad arki doontaa inay jiraan kuwa kale oo badan.
Ma kiraysan kartaa baabuur khadka tooska ah?
Adduunyada noocan oo kale ah ee internetku jabiyay dhammaan caqabadaha suurtagalka ah, waa in si cad loo yiraahdaa, sida iska cad, way gaari ku kireysto internetka.
Haddii aan ku qaadanno xoogaa daqiiqado ah waqtigeenna qaaliga ah ee aan kula baareyno kombiyuutarkayaga ama casriga ah, waxaan arki doonnaa in shabakadda ay ka buuxaan shirkado u heellan qaybtaan oo aan uga faa'iideysan karno adeegyadooda si aad u fudud oo gebi ahaanba ah khadka tooska ah
Waxaan sidoo kale heli karnaa kuwa caanka ah baarayaasha, Kaas oo noo fududeeya shaqadeena si aan caadi aheyn. Mashiinnada raadintaan ayaa dhex mushaaxa dalabyada kala duwan si ay noo muujiyaan kuwa innaga soo jiidasho iyo xiiso badan.
Waxaa ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee nala tusay miisaaniyadda y view. Miisaaniyadda waa hay'ad Californian ah oo la aasaasay dhammaadkii 50-meeyadii, oo hadda haysata in ka badan 3000 xafiis oo ku yaal 128 dal oo adduunka ah. Dhinaceeda, Avis waxaa lagu gartaa iyadoo ay naga go'an tahay isku dhaf ballaaran oo noocyo kala duwan leh iyo nooc kasta oo lagu qanci karo isticmaale kasta.
Iyo, illaa iyo inta ay ka walwalaan makiinadaha raadinta ee internetka, kama bixi karno adigoon sheegin KAYAK, oo ah barnaamij horudhac u ah moobiilka oo ku riyaaqaya naxariista bulshada inteeda badan si waxtarkeeda iyo fudeydkeeda leh Ha ka waaban inaad isticmaasho.
Sidee makiinadaha baaritaanka kirada baabuurta ay uga shaqeeyaan internetka?
Un mashiinka raadinta gawaarida ee internetka waa mid ka mid ah qalabka ugu fudud isticmaal. Sidoo kale, ku dhowaad dhammaan nidaamyadan waxay u shaqeeyaan si isku mid ah.
Sida aad ku aragto mashiinkeena baaritaanka gawaarida kirada ah, wuxuu na tusayaa mid yar oo ay ka muuqato nusqaamo kala duwan ama sanaadiiq madhan oo aan ku buuxin karno macluumaadka naloo dalbaday
Caadi ahaan, waa nala weydiiyaa meesha aan rabno inaan gaariga ka qaadno. Kadib, taariikhda ururinta iyo keenista isku mid ah. Ugu dambeyntiina, waxaan ku dhameystiri doonnaa astaamaha gaariga laftiisa: nooca, moodeelka, iwm.
Dabcan, waxay kuxirantahay mashiinka raadinta ee aan wajaheyno, waa inaan siino hal macluumaad ama mid kale, laakiin sida caadiga ah kuwani badanaa waa faahfaahinta sida caadiga ah nalooga baahan yahay.
Kaarka amaahdu ma loo baahan yahay in la kiraysto baabuur?
Kireynta gaari aan laheyn kaarka amaahda waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn, maxaa yeelay shirkadaha sameeya shaqadan badanaa saaxiibtinimo kuma lahan lacag bixinta.
Sababta tani waa mid aad u fudud. Baabuurku waa qaali, way adag tahay in la ilaaliyo, markaa hubinta in xaaladdiisu wanaagsan tahay ka dib marka la isticmaalo waa muhiim. Si tan loo sameeyo, waxay abuuraan nooc ka mid ah caymiska kuwaasoo lagu daro qiimaha bilowga kirada gaariga.
Caymiska la sheegay waxaa bixinaya oo keliya isticmaalaha haddii ay taasi dhibaato ku keento gaariga. Dhanka kale, waxay ku sii ilaalinayaan waxa loo yaqaan dhigasho, taas oo aan ka badnayn xanibaada bilowga ah ee xaddi lacageed oo wadarta guud ee laga heli karo kaarka, kaas oo la sii dayn doono marka la gaadhsiiyo gaadhiga isagoo xaalad fiican ku jira.
Tani waa sababta ugu weyn ee kaararka deynta marwalba loo isticmaalo marka baabuur la kiraysto. Laakiin waxaan dhahnaa had iyo jeer, maxaa yeelay tani way is beddeleysaa, maantana waa suurtagal in la kireysto gawaarida iyada oo loo marayo lacag bixinta shirkadaha qaarkood sida, tusaale ahaan, AutoEurope.
Kirada baabuurta ee udhaxeysa shaqsiyaadka
Maalmahan, shirkado cusub ayaa soo baxay oo adeegsanaya nidaam kale oo shaqeynaya. Iyagu mar dambe ma ahan kuwa iyagu gawaaridooda na siiya annaga oo quudinno, laakiin halkii ay ku samayn lahaayeen iyaga oo adeegsanaya gaar ahaan.
Si kale haddii loo dhigo, dad kala duwan ayaa baabuurtooda ka kireysta shirkadda, iyada oo ujeeddadeedu tahay oo keliya macaash. Iyagoo adeegsanaya xayeysiin, waxay ku caddeeyaan qiimaha iyo helitaanka, kooxaha xiisaynayaana way la xiriiraan iyaga. Kiraystaha iyo macmiilku waxay kulmayaan keenista iyo ururinta gaariga, oo had iyo jeer waa inuu ahaadaa mid hagaagsan oo haan shidaal oo buuxa leh.
Qaabkan fudud, waxa loo yaqaan 'kireysiga baabuurta ee u dhexeeya shakhsiyaadka'.
Ugu dambeyntiina, haddii aad u baahan tahay inaad kireysato gaari muddo aad u dheer, laga yaabee ikhtiyaarka ah inaad kireysato Mercedes ama nooc kale oo caymis ah ayaa kuu fiicnaan doona adiga maxaa yeelay waxay bixiyaan qiimo aad u tartan badan oo muddo ka dib waxaad dooran kartaa inaad dib u cusbooneysiiso ama aad ku soo celiso bilaa waajib.